GPS နဲ့ GPRS ,AGPS မတူညီမူများ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Knowledge and FAQ , အထွေထွေ » GPS နဲ့ GPRS ,AGPS မတူညီမူများ
By သန့်ဇင်ဌေး4:28 AM23 comments
ကျွန်တော့ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ သိမှာပါ။ ကျွန်တော် ရေးသမျှပိုစ့်တွေ တော်တော်များများက IT knowledge ပိုင်းတွေကို ဦးစားပေးရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟုသုတပိုင်း သိသင့်သိထိုက်တာတွေကိုပဲ့ ကျွန်တော် အများစု ရေးဖြစ် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေရင် ထောက်ပြဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့လည်း GPS နဲ့ GPRS ,AGPS အကြောင်းကို ကျွန်တော်ရေးပါဦးမယ်။ ဒီအကြောင်းကို မရေးခင်က ကျွန်တော် 3G နဲံ့ 4G ကွာခြားချက်ကို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ laptop and Notebook ဘယ်လိုကွာတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြဖူးခဲ့သလို flash song လုပ်နည်း. Laptop ၀ယ်ရာတွင် သိရမည့် အချက်များ. Cloud computing. အကြောင်း .ISO အကြောင်း window version များအကြောင်း နဲ့ စပ်ဆက်မိတဲ့ အကြောင်းအရာတော်တော်များများကို ဖော်ပြရေးပြခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ GPS နဲ့ AGPS အကြာင်းကို ရေးပါမယ်။ ဘာလို့ ဒီအကြောင်းကို ရေးတာလည်းဆိုတာကတော့
ကျွန်တော်တို့ ခုနောက်ပိုင်း ကင်မရာ ၀ယ်တဲ့ အချိန် ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းဝယ်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ဖြစ် GPS ,AGPSနဲ့ GPRS ဆိုပြီး ပါလာတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီ၃ မျိုးမှာ ဘာတွေ ကွာခြားသလို ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိသလဲဆိုတာကို သိဖို့လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူများ ရှေ့ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေ မပြောခင် စာဖတ်သူတို့ ကင်မရာတို့ ဖုန်းတို့ ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် အောက်က ပုံလေးထဲ့ကလို နေရာမှာ GPS ,AGPS ,GPRS ပါလာရင် ဘာတွေ သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရယ်. ဘာအကျိုးသက်ရောက်မူ ရှိမယ်ဆိုတာကို စာဖတ်သူ သိရဲ့လားဆိုတာကို တွေးကြည့်ပေးပါဦး ။
GPS ဆိုတာကနေ စပါမယ်။ GPS ဆိုတာ ခေတ်မှီတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတော်တွေရဲ့ တပ်မတော်တွေအတွက် ထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ system တခုပါ။ GPS ရဲ့ အရှည်ကတော့ Global Positioning System ပါ။ သူက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လည်းဆိုတော့ မြန်မာလို နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် ဂြိုလ်ပတ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ satellites 32 ခုကနေပြီးတော့ တချိန်တည်းမှာပဲ့ information4ခုကို သိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ GPS မှာ location ကို satellites ကတွက်ပေးသမျှ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ device ပေါ်ကို ပြန်ချပေးပါတယ်။ ဒါကတော့ GPS မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ system ကိုဖော်ပြပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။GPS စနစ် တခု အလုပ်လုပ်ဖို့တွက် station ၃ ခု ဒါမှမဟုတ် အထက်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီကြားတည်း ညှပ်ပြောချင်တာက GPS က AGPS ထက် အကွာအဝေး အတိုင်အတာ ရှည်ရှည်သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ ကားပေါ်. ရထားပေါ် နဲ့ သဘောင်္ပေါ်တွေမှာက အစ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးနေပါပြီ။ GPS ဆိုတာ positioning service တခုဆိုတာကိုလည်း သတိထားလာခဲ့ပေးပါဦး။ AGPS ကတော့ ဘာတွက်သုံးလည်းဆိုတာကို ဆက်ကြပါဦးစို့..
AGPS ကတော့ mobile phones တွေနေရာတခုတည်းကနေပဲ့ Data Link တွေကို ရနိုင်ဖို့တွက်ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ AGPS ကလည်း GPS လိုပဲ့ Location ရှာတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပေ့မယ့် သူမှာ extra charges တွေ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ data link တွေကို ရဖို့ပါပဲ့။unlimited data plan ကို ရရှိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်တွက် AGPS က အသုံးဝင်ပေ့မယ် unlimited data plan မဟုတ်တဲ့ တခုဆိုရင်တော့ mobile phone company က ချပေးထားတဲ့ amount အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးပဲ သုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တာတွေ ပြောပြီး မေ့တော့မလို့ AGPS ဆိုတာ assistance Global Positioning System ကိုပြောတာပါ။AGPS မှာတော့ကြားခံ assistance server တခု ရှိပါတယ်။ ဒီ server တွေကနေတဆင့် မိမိရောက်ရှိနေတဲ့ location ကို ပြန်တွက်ပေးပါတယ်။server ကြားတည်းက ခံတယ်ဆိုလို့ GPS ထက် location တွက်ချက်နုန်းနှေးသွားတယ်တော့ မထင်လိုက်နဲ့နော် AGPS က GPS ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။
ကဲ့ ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီ ၃ ခုထဲ့မှာ ကွဲထွက်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ့ အပေါ်က GPS ရော AGPS ရောက Location ရှာတဲ့နေရာမှာ သုံးပေ့မယ့် ဒီကောင်လေးကတော့ email တွေ multimedia messaging တွေနဲ့ အင်တာနက် browser တွေအတွက်ပဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကွဲတာတွေ ထပ်ကြည့်ပါဦးနော်... ဘာတွေများလဲဗျ..
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဆက်ပြောပြပါဦးမယ်။ GPRS က Data service တခုပါပဲ.။ ဒီထက်ပိုတာက video calls service တွေထက် 2G telecommunication networks ကို အထောက်ကူပေးတဲ့ technology လိုဆိုပါတယ်။နောက်ပြီး GPRS ဆိုတာ 2G technologies ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုပါပဲ့။နဲ့နဲ ဟောင်းတဲ့ အထဲထဲမှာ ပါနေပြီလို့လည်း ဆိုလို့တော့ရတာပေါ့ 2G ဆိုတာကို :P နောက်ပိုင်းတော့ 3G က GPRS နေရာကို အစားထိုး ၀င်ရောက်ခဲ့တာပါပဲ့။GPRS ရဲ့ သိသာထင်ရှားပြီး ကွဲထွက်လာတဲ့ အချက်က cellular towers တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာပါပဲ့။tower မရှိတဲ့နေရာဆိုရင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတယ်နော် GPS လိုတော့ stations ၃ခု မလိုပါဘူး။ တခုတည်းရှိယုံနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ ကျွန်တော် GPS နဲ့ ယှဉ်ပြီးပဲ့ ၃ ခုလုံးကို အနှစ် ပြန်ချုပ်ပြီး နိူင်းယှဉ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
GPS Vs AGPS အနှစ်ချုပ်ကွာခြားချက်..
GPS က satellites တခုတည်းပေါ်မှာ တွက်ချက်ပေ့မယ့် AGPS ကတော့ satellites နဲ့ assistance server အားထားပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
AGPS receiver တွေက mobile device တွေတွက် အဓိကထားသလို GPS ကတော့ standalone devices တွေတွက်ပါ။
AGPS တွက်ချက်နူန်းက GPS ထက် location ရှာတာ ပိုမြန်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောဖို့ မေ့သွားတယ်ဗျာ.. AGPS ထဲ့မှာ တခုကျန်နေတာလေးကို ဒီနေရာမှာပဲ့ ဖြည့်ပြောသွားပါဦးမယ်။ AGPS က certain situations တွေမှာ GPS ထက်ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။
GPS က Free ဆိုပေ့မယ့် AGPS မှာတော့ additional charges ဒါမှမဟုတ် extra charges တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ ဖုန်းကုမဏ္ဍီတွေကနေ ရောင်းချပါတယ်။
GPS vs GPRS အနှစ်ချုပ် ခြားနားချက်..
GPS ကpositioning service တခုလို့ ဆိုပေ့မယ့် GPRS ကတော့ mobile phones တွေမှာသုံးတဲ့ Data Service တခုပါ။
GPS က ကမာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ location တွေကို ရှာပေးနေတဲ့ အရာ... GPRS ကတော့ emails,နဲ့ browse တွေအတွက် ပါပဲ့။
GPS က satellites တွေ စုထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အများစုနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပေ့မယ် GPRS မှာတော့ terrestrial tower ( အမြင့် မျှော်စင်လို့ သတ်မှတ်လို့ရသလို တောင်စွန်တောင်ဖျားမှာ ထောင်ထားသောလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။) ဒါမှမဟုတ် cellular towers တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာတော့ ကန့်သတ်ချက်က ဒီ tower တွေ ရှိတဲ့ နယ်မြေအတွင်းပဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါမယ်လို့ ဆိုလိုရပါတယ်။
GPS ကအလုပ်လုပ်ဖို့တွက် stations ၃ ခု လိုနေချိန်မှာတော GPRS က station တခုပဲ့လိုပါတယ်။
GPS က ကောင်းကင်ကို မြင်ရတဲ့ ဘယ်နေရာမဆို အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာတော့ GPRS က limit တွေ ပြည့်နေတဲ့ tower တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ရှင်းပြချင်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ SMTP ဆိုတာ ဘာအတွက် IAMP ဆိုတာ ဘာ WAP, EDGE ဆိုတာ ဘယ်လို နေရာတွေတွက် ဘာအတွက် mobile တွေမှာ ပါလာတယ်ဆိုတာကို ပြောပြဖော်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို ပိုင်းတွေကျ စိတ်မ၀င်စားမှာလည်းဆိုတာနဲ့ တောင်းဆိုသူ ရှိမှာသာ ကျွန်တော် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးခဲ့သလောက်ဆို Mobile တွေမှာပါလာတဲ့ GPS တွေက ဘာအတွက် ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်းနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ..
next one links
Asareader, I request you to write pls
I love reading techno posts
နတ်မင်း January 30, 2012 at 11:19 AM
ကျေးဇူးပါညီလေး အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ပေါ့ နောက်လည်း တင်ပေးပါအုံး ပို့စ်တင်တာတွေကို အကုန်လိုက်ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတရှာနေပါတယ်
Anonymous January 30, 2012 at 1:05 PM
I hope ur new post!
ကျေးဇူးပါအကို နောက်ထက်သိချင်တာလေးတခုရှိပါတယ် ကျွှန်တော်ကထိုင်းမှာအကို ကျွှန်တော်အခန်းမှာ internet ချိတ်ထားပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ wifi နဲ့ ပေးသုံးထားပါတယ် ကျွှန်တော်သိချင်တာကအကို ကျွှန်တော် wifi ကိုဘယ်နစ်ယောက်သုံးနေလဲဆိုတာကို ကြည်လို့ရတယ်လို့သူများတွေပြောနေတာတွေကိုကြားပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကို မသိလို့ပါ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိချင်ပါတယ် ကျွှန်တော်စက်က windows7notebook
ကိုသုံးပါတယ်အကို please ....
lional January 30, 2012 at 4:52 PM
ကျေးဇူးပါအကို အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ....
nainglin January 30, 2012 at 10:34 PM
အခုလို ရှင်းပြပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....အကို...
Thu Ra January 31, 2012 at 5:10 AM
နည်းပညာ Post တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်
Post အသစ်တွေကို စောင့်မျှော်လျှက်ပါ
ကျွန်တော် Print ထုတ်ချင်လို့ ကော်ပီကူးတာ ကျန်တာတွေအကုန် ထုတ်လို့ရပါတယ်။
GPS အကြောင်းရေးထားတဲ့ တပိုဒ် က print ထုတ်လိုက်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုတွေချည်းပဲ ပေါ်ပြီး
မြန်မာလို လုံးဝမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် အကို။ အကို ပိတ်များပိတ်ထားလားဟင်
အဆင်ပြေရင် PDF လေးနဲ့ ရှဲပေးပါလား အကိုရယ်
Print ထုတ်ပြီး သိမ်းထားချင်လို့ပါ...
phone win March 11, 2012 at 3:00 PM
awaykalupar March 29, 2012 at 11:02 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုနေမင်းမောင်.....နောက်ထက် နည်းပညာတွေ ထပ်ပေးပါဦး
Ni Tun Oo April 29, 2012 at 7:26 PM
f@x နဲ့ AGK မှာ GPS Reviver Stick လေးတွေရောင်းတာတွေ့ရပါတယ် လက်တော့နဲ့သုံးကြည့်ခြင်ပါတယ်-နောက်ပြီး GPS တရစ်ကာ - Ticker လားမသိဘူး သူက
ဘယ်လိုလုပ်လဲသိခြင်ပါတယ် အခန့်သင့်ရင် တင်ပေးပါအုံး ကျေးဇူးပါ
Pyinnyadepa May 16, 2012 at 11:26 PM
Eclair May 17, 2012 at 8:00 PM
အရမ်းဗဟုသုတရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်သိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သလို အများသိထားသင့်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း WAP, EDGE, EVDO, WCDMA, စတာလေးတွေ အရမ်းသိချင်ပါတယ်အကို။ ကျေးဇူးတင်လေးစားလျက်.....
Anonymous May 21, 2012 at 12:15 PM
အခုလိုမျိုးသေးစိတ်သိရတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုစနစ်တွေသုံးနေတာသိရတာပေါ့။ ဆက်လက်ပြီး အခုလိုမျိုး လက်တွေ့ အသုံးလေးတွေဝေမျှပေးပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I would like to know how to connect blue tooth from mobile phone to laptop.I searched about it in google but I don't understand their instructions.And also I tried it on my way but in vain.So,if you have time,please write about it how to do.
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ရှင်းလင်းချက်ပါ နောက်ထပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ မျှဝေပေးနိူင်ပါစေ......
Thank you for your knowledge shear.
mhinzar lay December 24, 2014 at 9:50 AM
blog အသစ်လုပ်ထားလို့ post လေးတွေကို copy ကူးမယ်နော် မူရင်းနံမည်လည်း ထည့်မှာပါ :)